ALLEROED, DEMOKRASIKA, DESAMBRA 2, 2019 - YouTubers, mpamorona feo, podcasters, vlogger ary mpamorona votoaty hafa, ao anatin'izany ireo mpamorona horonantsary maniry ny haka ny horonam-peo marina amin'ny ataon'izy ireo, dia afaka manao izany amin-kafaliana noho ny fandefasana ireo vaovao. 4560 CORE Binaural Headset Microphone avy amin'ny mpanamboatra Danemark, DPA mikrô.
Ny headset binaural vaovao dia manome ny kalitaon'ny feo avo lenta izay ampalaza ny vokatra DPA eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ny kalitaon'ny mikrôfôna matihanina dia mamela azy ireo hisambotra, amin'ny tena fotoana, izay tena ren'ny sofina tsirairay mba hahafahan'izay mihaino am-peo an-tariby miaina ny feo lalina. Ireo toetra ireo dia manintona ireo rindranasa hafa toy ny firaketana ny firafitry ny feo, ny fandalinana ny soundcape, ny fanombanana ny kalitaon'ny feo, ary ny feo ho an'ny famokarana teatra na lalao, sns. Jazz sy mpitendry mozika kilasika koa dia nahita ny mety ho an'ity mikrô ity: ny firaketana ny feo avy amin'ny fomba fijerin'ireo mpanakanto fa tsy ny mpijery dia fomba iray vaovao hizarana ny traikefa an-tsarin'ny mpanakanto amin'ireo mpankafy. Ny valiny, traikefa farany manodidina.
Ny fon'ny 4560 CORE Binaural Headset vaovao amin'ny DPA dia misy mikraosona 4060 CORE Miniature Microphones mipetaka amin'ny tadivavarana roa ary mipetraka eny ivelan'ny lakandrin'ny sofin'ny mpampiasa (toy ny tsofina-kavina). Izany dia mamela ny hisintona mivantana (1: 1) ny feo henon'ilay olona manao ilay fandraisam-peo. Ny tadin-tsofina amin'ny sofina dia miraikitra amin'ny headset azo ampiasaina izay mora apetraka, mahazo aina hitafy ary mora apetraka mba hifanaraka amin'ny haben'ny lohany tsirairay. Ny efijery foam dia omena miaraka amin'ny mikrôona mba hahazoana antoka ny toerany ary manisy fofona malefaka ny rivotra.
Ny 4060 dia nisafidy marika firaketana feo matihanina amin'ny sary mihetsika lehibe, toy Spider-Man: hanatonana ny tarika lafiny ary Misionera: Tsy azo atao - fianjerana. Fantatra ihany koa fa ny mpangalatra 4060 tsirairay dia mety ho "feno" ao anaty sofina mba hahazoana fandraketana maharesy lahatra. Ankehitriny, misy vahaolana feno miaraka amina andiany mikrô manara-penitra izay mifanakaiky tsara araka izay azo atao.
Ho fanampin'ny mora ampiasaina, ny 4560s dia afaka mametaka amin'ny fitaovam-peo an-tsoratra, toy ny DPA's MMA-A Digital Audio Interface, izay mampifandray amin'ny iOS-fitaovana hafa. Ity dia manome vahaolana ho an'ny mpampiasa finday haingana sy mora fanoratana finday binaural ho an'ny toerana rehetra.
"Ny firaketana an-tsoratra miaraka amin'ny DN's 4560 CORE Binaural Headset dia marina tsara ka matetika ny mpihaino no mamily ny lohany hitady ny loharanon'ilay feo," hoy ny DPA Product Manager Dene Rene Moerch. "Raha ny marina, ny votoaty noraketina tamin'ity vokatra ity dia tokony ho henoina amin'ny alàlan'ny headphone satria hafa dia tsy mitovy ny traikefa amin'ny audio rehefa alefa any amin'ireo mpandahateny stereo. Na izany aza, misy teknika afaka manome fanitsiana sy fampifangaroana amin'ny endrika stereo sy multichannel, mahatonga an'io vokatra io ho ilaina ho an'ireo mpanoratra horonantsary izay te hanangona votoaty ho an'ny feo avo amin'ny atmosfera. ”
Moerch dia manampy fa ny endri-javatra mahasoa iray hafa an'ny DPA 4560 CORE Binaural Headset Microphone dia ny fahafahany mamitaka; Kely ny mikrô mba ahafahan'ny olona mitazona ny headset dia mety toa ny manao ihany koa izy ireo. "Ity dia azo atao mahasoa ho an'ny olona firaketana amin'ny tontolo feno fankahalana izay tsy azo antoka na mety hanehoana mikrô." "Ho an'ny famokarana nentim-paharazana toy ny podcast ohatra, ny rakitsoratra binaural dia manome votoaty izay tena mivelona kokoa, velona ary mandrisika raha ampitahaina amin'ireo teknika nentim-paharazana."
Voatanisa ao amin'ny $ 4560 USD ny 1099.95 CORE Binaural Headset Microphone vaovao an'ny DPA. Raha mila fanazavana fanampiny dia tsidiho azafady www.dpamicrophones.com/4560.
4560 CORE Binaural Headset Microphone fampitana injeniera fampitana Engineering DPA mikrô Graham Chapman navoaka ho an'nyEditor Mikrôphônin'ny headset feo mandady isovideo, viarte, HDR, tabataba fampihenana, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC, 2015, bitrate fampihenana, immersive, UHD / 4K / HD, H264 / H265, Warsaw Nanodidina feo Video injeniera 2019-12-02
Next: KRK Limited Edition ROKIT G4 "White Noise" fanaraha-maso Ankehitriny